အခမဲ့ IPHONE ပေါ်မှာ VAYBER DOWNLOAD - IOS အတွက် - 2019
IPhone အတွက် Viber ကို
သစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသောကဒ်ဝယ်ယူသည့်အခါစွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ကြောင်းမလွှဲမရှောင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်ကျနော်တို့ရောင်းသူလှည့်ဖြားကြဘူးလျှင်နားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, နှင့်တာဝန်များကိုတစ်ဂရပ်ဖစ် accelerator ဖြေရှင်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Software များ
သဘာဝခုနှစ်, စနစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှုနိုင်မအများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာတစ်လောကလုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့တိကျသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် "ထူးဆန်း" ။
GPU ကို-Z ကို။
ဤသည် utility ကိုဗီဒီယိုနဲ့သီးသန့်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ထွက်မော်ဒယ်အမည်, နှင့်မှတ်ဉာဏ်မြန်နှုန်းပမာဏနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာနှင့်: main window ကိုငါတို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများ၏အချက်အလက်များ၏အများစုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
AIDA64 တစ်ခု universal ဆော့ဖျဝဲတစျခုဖွစျသညျ။ အပိုင်း "ကွန်ပျူတာ"လက်တလက်၌ "အကျဉ်းချုပ်ပြန်ကြားရေး" သငျသညျဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ကိုနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်မြင်နိုင်ပါသည်,
ဒါပေမယ့်သင်ကအပိုင်းကိုသွားလျှင် "မြေပုံ" နှင့် scroll "ဂရပ်ဖစ်ပရို"က The အစီအစဉ်ကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအားငါပေးမည်။ ထို့အပြင်၌၎င်း, ဤအပိုင်းကိုအခြားပစ္စည်းများဂရပ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့။
Method ကို 2: Windows ကိရိယာတွေ
ဂရပ်ဖစ် adapter နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်, ဒါပေမယ့်စုံစုံပြသနိုင်ခဲ့ကို Windows system utilities ။ ကျနော်တို့မော်ဒယ်မှတ်ဥာဏ်အရွယ်အစားနှင့်ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရနိုင်ပါ။
DirectX ကို Diagnostic Tool ကို။
ဒီ utility ကိုမှ Access ကိုမီနူးမှရရှိသောနိုင်ပါသည် "Run ကို"စာရိုက်ခြင်းအားဖြင့် dxdiag.
tab ကို "Screen" ဗီဒီယိုကဒ်၏အကျဉ်းချုပ်ပါဝင်သည်။
operating system ကိုနောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်။ Right-click နှိပ်ခြင်းဖြင့် desktop ပေါ်မှာကနေခေါ်လေ၏။ ရွေးချယ်ထားသောအဆိုပါ Explorer ကို Context Menu က, "screen resolution".
Next ကို, သင်လင့်ထားသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "အဆင့်မြင့် Options".
Properties window ကိုမှာ tab ကိုပေါ်, "Adapter ကို"ကျနော်တို့အချို့ video ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 3: ထုတ်လုပ်သူဆိုက်ကို
ယုံကြည်မဟုတ် software ကိုသက်သေခံချက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒီနည်းလမ်းကိုအသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြသို့မဟုတ်ကဝယ်ယူစီစဉ်ထားနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ် setting များကိုတစ်တိကျသောအဓိပ်ပါယျများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ site ပေါ်တွင်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါကကျွန်တော်တို့ကိုပျော့ပေးသောတနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ် adapter မော်ဒယ်ပေါ်ဒေတာအတွက်ရှာဖွေတဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့၎င်း၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်, ပြီးတော့တရားဝင် website တွင်စာမျက်နှာထုတ်ပေးဖို့ရှေးခယျြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, Radeon RX 470:
ရှာရန်စွမ်းဆောင်ရည် NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ:
setting များကိုသတင်းအချက်အလက် GPU ကိုကြည့်ရှုဖို့ tab ကိုသွားပါရှိရမည် "specification".
အဆိုပါနည်းလမ်းများအထက်ပါကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ် adapter ၏ parameters တွေကိုသိရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဗီဒီယိုကဒ်အကြောင်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များပေးသွားမှာပါ - အားလုံးတစ်ကြိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်, ဤနည်းလမ်းများရှုပ်ထွေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုသုံးပါ။
ဗီဒီယို Watch: Myanmar font install for iPhone, Samsung, & LG by easy way (စက်တင်ဘာလ 2019).